ကျော်ဟုန်း – နှစ် ၁၀၀ ဗိုလ်ချုပ် ဇာတ်လမ်းတို ဟိုတကွက်၊ ဒီတကွက် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျော်ဟုန်း – နှစ် ၁၀၀ ဗိုလ်ချုပ် ဇာတ်လမ်းတို ဟိုတကွက်၊ ဒီတကွက်
(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၅
ထိန်လင်းဖို့ဖွားခဲ့တယ်၊
မိန်းမပိုးတာတောင် ဖွဲ့ နွှဲ့ မနေတတ်သူ
(ဗျိုး ..မခင်ကြည်၊ မိန်းမပိုးရအောင်လာတယ်၊
(မောင်အောင်ဆန်း၊ မင်း – ဘုရင်ဖြစ်နေတယ်ဆို၊
ငါ့အိမ် လျှပ်စစ်မီးလေးလင်းအောင် လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလား)
(တနိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းတဲ့ တနေ့ ၊
တပါးသူထက်ပို ဘာခံစားခွင့်မှမယူတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
(ဟေ့ကောင် ထွန်းလှ၊ ကားပေါ်က ဆင်း
မင်းနဲ့ ငါ ဆင်းတွန်းကြရအောင်)
(ဟေ့ကောင် ကျော်စိန်၊ ရဲက သွားဖို့ လက်ပြနေပြီ၊ မောင်းတော့၊
(ငါက ငါ၊ ဥပဒေက ဥပဒေကွ)
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ တသားတည်း
ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာမှုနဲ့ တသားတည်း ဗိုလ်ချုပ်။
(မမကြည်.. စစ်သားလေးတွေကို ဈေးခြင်းတောင်းမဆွဲခိုင်းပါနဲ့ )
(သူတို့ ဖာသာ ဝင်လုပ်တာပါနော်)
သူတို့ က နိုင်ငံတော်အတွက် လူတွေ၊
ဒီလို ဝန်ထမ်း၊ အိမ်စေ မရောထွေးစေသူ
ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေးမယူတတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
ဆောင်းတွင်းကြီး အင်္ကျီအစုတ်နဲ့ အကြော်သည်
လမ်းမှာတွေ့ တော့ သူ့ ကုတ်အင်္ကျီအတင်းချွတ်ပေး
(ခင်ဗျား ဆင်းရဲတာ ကျုပ်နဲ့ ဆိုင်တယ်ဗျ၊ ရော့ – ယူ)
ဦးဝင်းတင်လောင်းလျာ ကလေးက ပူဆာ
(ဗိုလ်ချုပ်၊ ကျနော် စစ်ထဲဝင်ချင်တယ်)
(ငယ်သေးတယ်၊ ပညာ ဆက်သင်)
ဖလား ၂ လုံးထဲ ၀ိုင်းထည့်လှူကြ၊
သူ့ အတွက် ပြည်သူပေးတဲ့ ငွေ၊ ရတနာအားလုံး
လွတ်လပ်ရေးဖလားထဲ ပေါင်းထည့်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
နားသဖို့ ရွှေတပဲသား မရှိ၊
အမေ့ထံ ပြန် အမွေတောင်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုဖို့ အသွား
ဖျင်ကြမ်းဆာဖာရီကုတ်လေးနဲ့ မို့ 
ချက်ချင်းချုပ် လက်ဆောင်ပေးခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
သားသမီးအတွက် အင်္ဂလန်ပြန် လက်ဆောင်အရုပ်
ဘိလပ်ပြန်သန်းဆီ ကူအညီတောင်း ၀ယ်ခိုင်း
ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ မ၀ယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
သူ့ ဖဆပလနဲ့ သူ့ အပေါ်ကို
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေဆဲ ဗကပတွေအတွက်
လေယာဉ်လက်မှတ် ၂ စောင်ရအောင်လုပ်ပေး
အညှိုးအတေး မထားတတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
( ကျနော်တို့ လုပ်တာ တိုးတက်သလား၊
(ကျနော်တို့ ကို လူထုက မကျေနပ်တဲ့တနေ့ ၊
ကျနော်တို့ လဲ မနေပါဘူး၊ ဆင်းသွားမှာပဲ)
အာဏာ၊ ရာထူး၊ မရူးသွမ်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
(ကြည် .. ပဲပြုပ်နဲ့ နံပြား ရရင် စားချင်တယ်)
ရရင် စားမယ်၊ မရရင် မစားဘူး။
တကိုယ်စာ ဆန္ဒအတွက် အဓမ္မမကျင့်တတ်ပေမယ့်
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးဆို နှုတ်ကတိ မယုံ၊
စားပွဲဝိုင်းမှာတင် လက်မှတ်အတင်းထိုးခိုင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
ပထမဆုံး လုံးဝလွတ်လပ်ရေးတောင်းတာ ဗမာ၊
အဲဒီ ဗမာဟာ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်။
၁၉၄၇ တိုင်းကျိုးပြု ဥပဒေ စာတမ်း၊
သူ့ အသက် ၃၂ နှစ်၊ ၅ လ နဲ့၆ ရက် မတိုင်မီ
အလုံးစုံ မှာတမ်းခြွေခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
သူကိုယ်တိုင် ရိုးဖြောင့်သန့် စင်ကြယ်၊
ကိုယ်၊စိတ်၊နှလုံး ၃ ပါးလုံး
အများပိုင် ရုပ်နာမ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။
နောင် ကမ္ဘာတည်သရွေ့သစ်မြဲ။
ဗိုလ်တကာ့ဗိုလ်တို့ ရဲ့ အချုပ် ဗိုလ်ချုပ်။
၁၉၄၇၊ ဇူလိုင်၊ ၁၉ မှာ
နယ်ချဲ့ နဲ့ လူမသမာတွေ လုပ်ကြံမှုကြောင့်
သူ့ ခန္ဓာ ရုပ်နာမ်လွဲခဲ့၊
လူသေ – ၀ိညာဉ်မသေ
လူသေ – နာမည်မသေ
သမိုင်းမှန်မှာ ရှင်သန်နေဆဲ ဗိုလ်ချုပ်။
အစားထိုးလို့ မရပါဘူးလို့ ။
(မယုံရင် ခု စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်)
2 Responses to ကျော်ဟုန်း – နှစ် ၁၀၀ ဗိုလ်ချုပ် ဇာတ်လမ်းတို ဟိုတကွက်၊ ဒီတကွက်
myintzaw on January 1, 2015 at 11:57 am
တကယ်တန်းဖိုးရှိတယ်။ ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတာအမှန်ဧကန်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖတ်ခွင့်ရတာကို ကျေးဇူးပါ
Paing Htwe on January 5, 2015 at 10:11 am
Dear Mr. Kyaw Holme! Thank you so much for the poem. It is very touchy or much more than that, I can’t find the words that enough to say the meaning. I was crying, tearing and reading. I thanks you. With Warm and Kind Regards